Uzixhoma njani izibane zeKrisimesi njengePro-UkuKhanya kweholide kuxhoma ngaphakathi nangaphandle - Uyilo Lokuphefumlela
Uzixhoma njani izibane zeKrisimesi njengePro-UkuKhanya kweholide kuxhoma ngaphakathi nangaphandle
Gcina izibane ziqinile emthini ngokwawo, ke akukho zingcingo zingcolileyo, utshilo. Ukwenza njalo, u-Yöung usebenzisa amagwegwe afana neepaperclip, awasongele esihlahleni nasemasebeni.
Endaweni yokurhangqa izibane ujikeleze umthi, uYöung ucebisa ngokusonga izibane kwisebe ngalinye kwaye ungene ngaphakathi kwakhona. Ngale ndlela, xa umthi ufakwe ngaphakathi kwaye ukhanyisile, ubona ubunzulu, jonga umthi ngokwawo, kwaye izihombiso ezixhonyiweyo azikhanyiswanga ngaphambili nje kuphela kodwa nangaphaya, utsho.
Ukusonga izibane kufutshane nesiqu somthi kunye namasebe kwenza kukhanye ngaphakathi.
U-Yöung uzuze njengelifa ingqokelela yomhombiso kuninakhulu kwaye wongeze eyakhe i-baubles -ingaphezulu kwe-1 000 iyonke, enyanisweni- edibanisa nefuthe elifanelekileyo. Kwaye xa umthi ubekwe efestileni, njengeYöung, izibane zibonakala ngathi ziyakhazimla.
Iithayile zekhitshi elingumqolo
Usebenzisa indlela efanayo yokutya ngaphandle. Apha, uYöung wongeze iFraser Fir garland yokwenyani ukusuka UWilliam-Sonoma kwizinyuko ezinyukayo ezikhokelela kumnyango wangaphambili. Ukudala into ayibonayo njengefestile, usike umsonto omnye wezibane ezimhlophe kuyo yonke igarland ukuyikhanyisa kwaye wamkele iindwendwe kwikhaya lezitena elibomvu.
Isitshixo, u-Yöung uthi, kukusongela izibane zijikeleze isiseko segalari kwaye emva koko ufihle iingcingo ngamasebe awo. Oku kuya kukunika ukujonga kwendalo kunye kwendalo, uyacacisa.
Indlela engaphantsi-ngakumbi, njengoko uYöung eyichaza ku-ELLE Décor , Vumela umthi weKrisimesi uhlale umboniso ophambili.
Nantoni na ayenzayo, iyasebenza. Ababhenqileyo bahambile kufutshane nakude baya kuncoma iholide yaseYöung kunye nokwabelana ngeefoto zekhaya lakhe Kwi-Instagram .
kulula ukunyamekela izinto zendlu
Ukuqala ngeengcebiso zikaYöung, jonga uluhlu lwethu lwe Izibane zeKrisimesi eziPhambili zangaphandle zokuhombisa ikhaya lakho ngeli xesha leholide .
Iindawo ezipholileyo zokutyelela
elf kwi-shelf pic
isihlangu esibambe ikhabethe
indlela yokwenza ukutya kweentaka